Welcome to Ningbo J & S Botanics Inc., sezvo dzakatangwa muna 1996, isu takaita aitungamirira nokutengesa Herb Extracts, Bee Products uye Food Supplements muna China, zvigadzirwa vari kunyanya yakatenderwa KOSHER uye ECOCERT makemikari chitupa. J & S Botanics rave yavose sezvavakatarirwa sezvo Ningbo Agricultural Mukusarudza Enterprise kubva 2009.
J & S Botanics iri muna Beilun mudunhu, Ningbo guta, zviri nyore kwazvo kuti zvose gungwa nenyika chokufambisa. fekitari yedu uye R & D Center kufukidza 2,400 maeka ane mari kuti $ 4,5 million.The kuisa zvivako uye muitiro Rwako vari zvakasimba kudzora maererano GMP mureza. Our goho kuti miriwo mushoma wepagore uri kusvika 1000MT, rinotaura 100 zvigadzirwa, tiri zvakasimba pamusoro zvitsva zvinogadzirwa tsvakurudzo.
Kuti vave nechokwadi chinhu Optimization nokuda mukugadzira unyanzvi uye kuramba zvepanyama basa zvinhu zvedu, J & S Botanics vakashandisa Doctor PARIDE kubva Italy, uyo anotungamirira boka vaongorori kuita updating mitoo yose nguva. Zvino J & S Botanics haana anazvo zvinopfuura 7 patents uye anokosha ruzivo wandei munyika kutungamirira chechetere. Izvi mazhinji nzira anotibatsira kuramba kurimwa kudzikama, vanatsiridze kushanda kunyatsoshanda uye muuye pasi madhuriro, naizvozvo maximized zvakanakira kuti vatengi vedu.
Inenge zvigadzirwa edu ose vari kuti ekisipoti. misika yedu huru zvinosanganisira Southeast Asia nyika, kuMiddle-East, Spain, Germany, France, Switzerland, Japan, USA, Australia, South Africa uye nharaunda Taiwan. Tariro kumisa yakareba Tern pamwe nemi, kana muine chero mubvunzo, tapota inzwa wakasununguka ngatiregei kuziva.